Lampard oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Arsenal… Muxuuse ka yiri qaab ciyaareekii ay bixisay Chelsea? – Gool FM
Lampard oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Arsenal… Muxuuse ka yiri qaab ciyaareekii ay bixisay Chelsea?
Dajiye December 30, 2019
(London) 30 Dis 2019. Tababare Frank Lampard ayaa dhaleeceeyay waxqabadka kooxdiisa Chelsea qeybtii hore ee kulankii Arsenal, inkastoo ciyaartoyda Blues ayaa ku guuleysatay in qeybtii labaad ee ciyaarta ay saddexda dhibcood kaga soo helaan Gunners garoonka Emirates.
Chelsea ayaa guul soo laabasho ah ka soo heshay kooxda Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates, kaddib markii ay kaga soo adkaa 1-2, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 20-aad ee horyaalka Premier League.
Natiijadan ayaa ka dhigtay in kooxda Chelsea ay kaalinteeda afaraad sii ilaashato, halka Arsenal iyo macalinkeeda cusub ee Mikel Arteta ay fadhiyaan booska 12-aad ee dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League.
Laakiin Frank Lampard ayaa wuxuu dhaleeceeyey qaab ciyaareedkii ay bixiyeen wiilashiisa Chelsea qeybtii hore ee ciyaarta wuxuuna u sheegay shabakada BBC:
“Waxaan aad u xumeyn 30-kii daqiiqo ugu horeysay ee ciyaarta, qaab ciyaareedka wuxuu ahaa mid kacsan oo aan fiicneyn, taasna waxay ka hor timid wixii aan ku soo bandhignay kulan sida Tottenham oo kale ah”.
“Arsenal waxay sameysay wax walba ee loo baahnaa intii lagu gudi jiray 45-kii daqiiqo ee ugu horreeysay, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan xakameyno qeybtii labaad ee ciyaarta”.ayuu yiri tababare Frank Lampard.
Si kastaba noqotee, kooxda Chelsea ayaa sanadkan 2019 ku dhameysatay si fiican waxayna 4 dhibcood ka sareysaa kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee Manchester United, iyagoo Arbacada soo aadanbooqan doona garoonka kooxda Brighton, ka hor inta aysan markale labo kulan ee kale ku ciyaarin garoonkooda Stamford Bridge kooxda Nottingham Forest koobka FA Cup, kaddib waxaa u xigi doona kulanka Premier League ay ku wajihi doonaan Burnley.
Mikel Arteta oo carro weyn ka muujiyay garsoorihii maamulyay kulankii London derby ay guuldarrada kala kulmeen Chelsea